गृहपृष्ठ » Uncategorized » जापानमा मानिस कसरी धेरै समय बाँच्छन्, १०० वर्ष बाँच्ने उपाय के हो ?
काठमाडौं । तारिख, जनवरी २ र दिन शुक्रबार थियो । जापानको एउटा सानो गाउँमा एक छोरीको जन्म भयो, जसको नाम केन राखियो । यो सन् १९०३ को कुरा हो ।
केन तानाकाको ११९ वर्षपछि अर्थात् अप्रिल २०२२ मा निधन भयो । उहाँ आधिकारिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो जीवनका अन्तिम वर्षहरू नर्सिङ होममा बिताउनुभयो ।
उहाँ बिहान ६ बजे उठ्नुहुन्थ्यो । गणितका प्रश्नहरू समाधान गर्नुहुन्थ्यो, बोर्ड गेम पनि खुबै खेल्ने गरेको स्थानीय स्मरण गर्छन् । चकलेट खानु, कफी र सोडा पिउनु उहाँको दैनिकी बनेको थियो । एक समय थियो जब अगाडिका मान्छेहरुले सय वर्ष बाँच्नु भन्दै आशीर्वाद दिन्थे ।
उक्त आशीर्वादलाई असम्भव मानिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यसकारण आज हामी आखिर मान्छेहरु १०० वर्षसम्म कसरी जिउँदो रहन सक्छन् भन्ने कुराबारे जान्न खोज्दैछौँ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न बीबीसीले चारजना विज्ञसँग कुरा गरेको छ ।
जापानको विज्ञान परिषद्का उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी डा. हिरोको अकियामा भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सय वर्षसम्म बाँच्ने कुरा कुनै असामान्य विषय होईन् ।’ डा हिरोको अकियामाको विशेषज्ञता ‘स्टडी अफ एजिङ्ग’ मा छ । उहाँका अनुसार जापानको जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बुढो हुँदैछ । जापानमा महिलाको औसत उमेर अहिले ८८ र पुरुषको औसत उमेर ८२ छ ।
जापानमा २९ प्रतिशत मानिसहरु ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका छन् । औसत उमेरको हिसाबले हङकङ, सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, इटाली र स्पेन मात्र जापानको नजिक आउँछन् ।
जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष देशका ८६ हजार ५१० नागरिक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका थिए । डा हिरोकोमा भन्नुहुन्छ, ‘जापानमा मानिसको लामो आयुका धेरै कारणहरू छन् ।
त्यसमध्ये एउटा विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली हो । हामीले सन् १९६० को दशकमा यसको सुरुवात गरेका थियौं । यहाँका मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउँछन् । अर्को कारण यो पनि हो कि जापानका मानिसहरू स्वास्थ्यप्रति धेरै सचेत छन्, उनीहरूको जीवनशैली स्वस्थ छ ।’
जापानीहरू धेरै मेहनत गर्छन् । उनीहरुले क्यान्सर र मुटु रोगबाट बच्न सावधानी अपनाउँछन् । डाक्टर हिरोकोले जापानका मानिसहरू खानामा धेरै ध्यान दिने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘कम बोसो खपत गर्छन् । माछा, तरकारी र हरियो चिया बढी खान्छन् ।’ उहाँका अनुसार जापानमा मानिसको औसत उमेर बढ्दै गए पनि कुल जनसंख्या घट्दै गएको छ । वास्तवमा केही समयदेखि जन्मदर घट्दै गएको छ । जागिर गर्न सक्ने उमेरका मानिसको संख्या पनि निरन्तर घटिरहेको छ ।’
जापानमा वृद्धवृद्धाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा जेष्ठ नागरिकहरुको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि विकसित हुँदै गयो । सरकारको मुख्य ध्यान स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन प्रणालीमा रहेको चिकित्सक हिरोको बताउँनुहुन्छ ।
आवास र यातायात व्यवस्थाको पनि ख्याल राखिएको छ । तर समाजका आधारभूत पूर्वाधारलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । डाक्टर हिरोकोले आफ्नो टोलीसँग मिलेर वृद्धवृद्धाहरू कसैमाथि निर्भर नभई बाँच्न सक्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन धेरै सामाजिक प्रयोगहरू गर्नुभयो । डाक्टर हिरोको भन्नुहुन्छ, ‘हामी समुदायको पुनर्संरचना गर्ने प्रयासमा छौं ।
ताकि वृद्ध समाजका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकियोस् । हामी एक त्यस्तो समुदाय सिर्जना गर्न चाहन्छौं जहाँ मानिसहरू स्वस्थ, सक्रिय र एकअर्कासँग जोडिएका छन् र १०० वर्षको उमेरसम्म सुरक्षित महसुस गर्छन् । हामीले वृद्धवृद्धाहरूका लागि मात्र होइन सबै उमेरका मानिसहरूका लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।’ जापानमा सेवानिवृत्त भएपछि मानिसहरु नयाँ जागिर सुरु गर्न थालेका छन् ।
उनीहरू आफ्नो दोस्रो क्यारियर अझ भनौं दोस्रो जीवन सुरु गर्दैछन्। यसले दिनचर्या कायम राख्छ र स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ । डा हिरोको अकियामा ७८ वर्षकी हुनुभयो, उहाँ अहिले आफ्नो दोस्रो करियरको आनन्द लिइरहनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म धेरै समय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थिएँ ।
म ७० वर्षको हुँदा खेतीपाती गर्न थालेँ । विभिन्न गुण भएका मसहित चारजनाले मिलेर कम्पनी बनाएर खेती गर्न थाल्यौँ । म सानो छँदा मलाई किसान बन्ने रहर थियो । त्यो पुरानो सपना थियो ।’ के हजुरलाई सय वर्षको उमेरसम्म बाँच्ने इच्छा छ भन्ने प्रश्नमा डाक्टर हिरोको अकियामाले आमाको मृत्यु याद गर्नुभयो । उहाँकी आमाको ९८ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उहाँको विचारमा सय वर्षको जीवन काफी छ । अकियामालाई सय वर्षभन्दा बढी बाँच्ने खास चाहना पनि छैन ।
बुढ्यौली के हो ?
बर्मिङ्घमको एस्टन रिसर्च सेन्टर फर हेल्दी एजिङ्गका वरिष्ठ लेक्चरर क्याथी स्ल्याक भन्नुहुन्छ, ‘बुढ्यौली एक अत्यन्तै व्यक्तिगत प्रक्रिया हो । कुनै पनि दुई व्यक्तिको एउटै बुढ्यौली प्रक्रिया हुँदैन ।’ हामी किन बूढो हुन्छौं र यसको जैविक प्रक्रियालाई ढिलो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन् भन्ने कुरामा क्याथीको प्रयोगशालाले जवाफ खोज्दैछ ।
बुढेसकालका बाहिरी लक्षणहरू सबैलाई थाहा छ, जस्तै, चाउरी पर्नु र कपाल फुल्नु रहेका छन् । तर बुढ्यौलीमा हाम्रो शरीर भित्र पनि धेरै कुरा चलिरहेको हुन्छ । क्याथीका अनुसार बुढ्यौलीको प्रभाव शरीरका सबै तन्तुहरूमा देखिन्छ । यसको प्रभाव मस्तिष्कदेखि प्रजनन क्षमतासम्म हुन्छ । यी परिवर्तनहरूलाई बुढेसकालको विशेषता भनिन्छ ।
क्याथी बताउनुहुन्छ, ‘यसमा धेरै प्रक्रियाहरू संलग्न हुन सक्छन् । कोशिका भित्र प्रोटिनको गुणस्तर नियन्त्रणको हानि हुन, माइटोकोन्ड्रियाको निष्क्रियता पनि हुनसक्छ ।’ माइटोकोन्ड्रिया कोशिकाको भाग हो जसले ऊर्जा उत्पादन गर्छ । उमेर बढ्दै जाँदा यसले काम गर्न बन्द गर्न सक्छ । क्याथीका अनुसार जब बुढ्यौली सुरु हुन्छ, तब मधुमेह जस्ता स्थायी रोगको जोखिम पनि बढ्छ । कोशिकाहरूले काम गर्नको लागि पोषक तत्वहरूको आपूर्तिलाई विनियमित गर्न आवश्यक छ ।
समस्या हुँदा स्टेम सेल अर्थात मुख्य कोशिकाहरू नष्ट हुन्छन् । स्टेम सेलहरूले कोशिकाहरू मर्मत गर्छन् । त्यसको परिवर्तन दिमागमा पनि आउँछ । क्याथी स्ल्याकले भन्नुभयो, ‘केही मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा मस्तिष्कको आकार सानो हुन्छ । जसकारण धेरै वृद्धहरुको स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ । एकैपटक धेरै काम गर्न उनीहरूलाई गाह्रो लाग्छ । उनीहरुको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ । उनीहरु कि त बढी चिन्तित हुन्छन् वा डिप्रेसनमा जान्छन् । तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यी सबै चीजहरू प्रत्येक वृद्ध व्यक्तिमा समान हुँदैनन् ।’
हामी कसरी सय वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षाहरू बढाउन सक्छौं भन्ने प्रश्नको जवाफमा क्याथी स्ल्याक बताउँनुहुन्छ, ‘आज पनि धेरै व्यक्तिहरू छन्, जो धेरै वृद्ध छन् । तर उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो देखिँदैन, त्यो पक्षमा काम गर्न जरुरी छ । यो पुरानो सल्लाह जस्तो लाग्न सक्छ तर हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
प्रायः सक्रिय रहने प्रयास गर्नुहोस् । उमेर बढ्दै जाँदा आफ्ना गतिविधिहरू जारी राख्ने प्रयास गर्नुहोस् । राम्रोसँग खानुहोस तर धेरै वा धेरै होइन । तपाईले लिइरहनु भएको रक्सीको मात्रामा विचार गर्नुहोस् ।
धुम्रपान बन्द गर्नुहोस् ।’ बुढेसकालको बारेमा अझै धेरै कुराहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन । क्याथी स्ल्याकले ऐतिहासिक रूपमा हामीले रोग प्रक्रियामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । क्यान्सर र अन्य रोगहरूमा काम गर्ने धेरै वैज्ञानिकहरू छन् । तर अहिले उनीहरूजस्ता वैज्ञानिकहरूको पनि समूह छ, जसले रोगहरूलाई उमेरसँग सम्बन्धित रोगको रूपमा हेरिरहेको छ । जसबाट धेरै रोगहरूको उपचारका नयाँ विधिहरू विकास गर्न सकिन्छ ।
न्युयोर्क शहरको अल्बर्ट आइन्स्टाइन कलेज अफ मेडिसिनको इन्स्टिच्युट फर एजिङ रिसर्चका निर्देशक नीर बर्जि बताउँनुहुन्छ, ‘मेरो प्रयोगशालामा हामीले प्रयासबाट शरीरको बुढ्यौलीको दरलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछौं । कतिपय अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ र यसको तिव्रतालाई उल्टाउन सकिन्छ । यो गर्न सम्भव छ ।’
विश्वमा सय वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिस कति छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । सन् २०२१ मा त्यस्ता पाँच लाख ७३ हजार मानिस रहेको संयुक्त राष्ट्रको जनसंख्या विभागले अनुमान लगाएको थियो । डा नीर बर्जि आफ्नो अनुसन्धानको बारेमा बताउँदै धेरै भन्दा धेरै मानिस सय वर्ष वा त्योभन्दा बढी बाँच्न चाहेको बताउनुहुन्छ ।
त्यसका लागि उनीहरूले खोजी र प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सय वर्ष पुगेका साढे सात सय मानिस र उनीहरुका परिवारसँग पनि सहयोग लिइरहेका छन् । उनीहरु यस्तो जीनको खोजीमा छन्, जसले बुढेसकालको गतिलाई सुस्त बनाउन सकोस् । यो जानकारी औषधि बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । उहाँको टोलीले वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित तीनवटा सम्भावनामा काम गरिरहेको छ । यी मध्ये पहिलोको उद्देश्य बुढ्यौली प्रक्रियालाई सुस्त बनाउनु हो । त्यसलाई काल्पनिक पात्र डोरियन ग्रेको नामबाट राखिएको छ, जसलाई उमेरले असर गर्दैन, तर यो प्रभाव उसको लुकेको चित्रमा देखिन्छ ।
नीर बर्जिलाई भन्नुहुन्छ, ‘दोस्रो अवस्थालाई हामी ‘युवाको झरना’ भन्छौं । यसले सबैलाई जवान बनाउने कुरा गर्छ । यसलाई सम्भव बनाउनु सबैभन्दा कठिन काम हो । तेस्रो स्थान सबैभन्दा रोमाञ्चक छ । यसलाई पिटर प्यान नाम दिइएको छ । यो काल्पनिक चरित्रको उमेर बढ्दैन् । यसका लागि बीस वा तीस वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई लिने विचार छ । उनीहरूलाई केही महिना वा वर्षमा एक पटक उपचार गराउनुपर्छ ।
उनीहरूमा बढ्दो उमेरको प्रभावलाई रोक्ने वा धेरै ढिला गर्नुपर्छ ।’ बायोमार्करहरू अणुहरू हुन्, जसले आन्तरिक रोगहरूबारे संकेत गर्दछ, जस्तै कोलेस्ट्रोल, जसले हृदयसम्बन्धि रोगलाई जनाउँछ । तर बुढेसकाल पहिचान गर्न यस्ता मार्करहरू फेला पार्न सजिलो छैन । नीर बर्जिका अनुसार हामीलाई धेरै बायोमार्करहरू चाहिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी दुई प्रकारको जानकारी प्रदान गर्न सक्ने बायोमार्करहरू खोजिरहेका छौं ।
पहिलो, जसले वास्तविक उमेर र जैविक उमेर बीचको भिन्नता बताउन सकोस् । तपाईलाई थाहा छ कोही मानिसहरु आफ्नो उमेर भन्दा कम देखिन्छन् भने कोही बढि देखिन्छन् । दोस्रो, हामी बुढ्यौली घटाउनको लागि बनाइएका औषधिहरू प्रयोग गर्दा बायोमार्करहरूमा परिवर्तनहरू देखाउन चाहन्छौं ।’ वृद्धावस्था रोक्ने उद्देश्यले तयार पारिएका कतिपय औषधिलाई नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको वा दिने तयारी पनि भइरहेको छ ।
तिनीहरू अन्य परिस्थितिहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, प्रत्यारोपण पछि, यी औषधिहरू दिइन्छ ताकि शरीरले अंगलाई अस्वीकार नगरोस् । डा। नीर बर्जि टाइप २ मधुमेह नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने ‘मेटफर्मिन’ नामक औषधिको दोस्रो उद्देश्यका लागि क्लिनिकल परीक्षणको अभियानको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।
के तपाई आशा गर्नुहुन्छ कि तपाईको जीवनमा यस दिशामा केहि ठूलो सफलता मिल्नेछ, जब बीबीसीले यो प्रश्न सोध्यो, जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘हो, अवश्य पनि । हामी दुई वर्षमा के गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई बढी मूल्याङ्कन गर्छौं, तर हामीले पाँच वा १० वर्षमा के गर्न सक्छौं भनेर कम आँकलन गर्छौं । मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा ठूलो लहर चलिरहेको छ । विश्वभरका धनाढ्यहरूले पनि यसमा लगानी गरिरहेका छन् र यसको गति अझै बढ्ने देखिएको छ ।’
साथीहरू उमेर बढाउँछन्
हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका मनोचिकित्साका प्रोफेसर रोबर्ट वाल्डिङ्गरले भन्नुभयो, ‘अरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र गहिरो सम्बन्ध भएका मानिसहरू कसैप्रति पनि माया प्रेम नदेखाउने मानिसहरूको तुलनामा लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्ने गर्दछन् ।’ अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा मिलनसार व्यक्तिहरु झगडालु व्यक्तिहरु भन्दा धेरै बाँच्छन् ।
हार्वर्ड स्टडी अफ एडल्ट डेभलपमेन्टका निर्देशक समेत रहनु भएका रोबर्ट वाल्डिङ्गर भन्नुहुन्छ, ‘यो हाम्रो अध्ययनको ८४ औं वर्ष हो । हाम्रो ज्ञानमा, यो व्यक्तिहरूको एक समूहमा सबैभन्दा लामो अध्ययन हो । किशोरावस्थामा सुरु भएको थियो, बूढो नभएसम्म जारी रहन्छ । अहिले उनीहरुका छोराछोरीको पढाइ सुरु गरेका छौँ । हामीले मानव जीवनमा के गल्ती भयो भनेर जान्न प्रयास गरेका छौं । यसले सही मार्गमा गइरहेको जीवनलाई पनि अध्ययन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
’ यो अध्ययन १९३८ मा सुरु भएको थियो । रोबर्टका अनुसार सुरुमा ७२४ जना सहभागी थिए । तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु भइसकेको छ । तर नब्बे र सय वर्षभन्दा माथिका कतिपय मानिस अझै जीवित छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस अध्ययनले हामीलाई थाहा भएका केही कुराहरू पनि पत्ता लगाएको छ, जसमा पौष्टिक आहारदेखि स्वस्थ्य जीवनशैली पनि छन् । यसबाट लामो जीवन जिउन मद्दत पुग्छ ।’
रोबर्टका अनुसार यो अध्ययनबाट अन्य व्यक्तिसँग बढी सम्बन्ध राख्ने, आफ्नो वरपरका मानिसहरूसँग बढी जोडिएका र मिलनसार मानिसलाई स्वस्थ रहन धेरै मद्दत पुग्ने गरेको देखाएको छ । रोबर्ट वाल्डिङ्गरले भन्नुभयो, ‘अहिले यसबारे धेरै अनुसन्धान भइसकेको छ । यसमा सबै भन्दा राम्रो परिकल्पना तनाव र तनावलाई हराउने कुरासंग सम्बन्धित छ ।
मानौं यदि दिउँसो केहि भयो, जसले तपाईलाई दुखी बनायो वा तपाईले कसैसँग झगडा गर्नुभयो भने, तपाईले आफ्नो शरीरमा कसिलोपन महसुस गर्नुहुनेछ । यस्तो अवस्थामा तपाईं घर आउनुहोस्, आफ्नो कुरा सुन्ने विश्वासयोग्य व्यक्ति छ भने, तपाईंले आफ्नो थकान कम भएको महसुस गर्नुहुनेछ । हामी विश्वास गर्छौं कि जो एक्लै छन् उनीहरूको क्रोध कहिल्यै पूर्ण रूपमा कम हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुको शरीरमा सधैं हल्का तनाव भइरहेको हुन्छ । यसले शरीरको प्रणालीलाई बिगार्न थाल्छ । अनुसन्धान मार्फत, हामीले जानकारी पायौँ कि राम्रो सम्बन्धले हामीलाई तनावबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछ ।’
जुनसुकै सम्बन्ध पनि लामो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छ । तर केहि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो एक्लोपन मन पराउँछन् । उनीहरुका लागि, रोबर्ट वाल्डिङ्गर भन्नुहुन्छ, ‘यो महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो । हामी सबै असल मानिसहरूसँग सम्पर्कमा रहन चाहन्छौं ।
हामी मध्ये केही अन्तर्मुखी छौं, यो कुनै समस्या होइन । अन्तर्मुखीहरूले महसुस गर्छन् कि उनीहरू वरपरका अधिकांश मानिसहरू तनावमा छन् । उनीहरुलाई एक वा दुई जना नजिकको मान्छे चाहिन्छ । तीनीहरुको लागि यो पर्याप्त छ । स्वस्थ जीवनका लागि कति सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटै सूत्र सबैमा लागू हुँदैन ।
यति मात्र होइन, घरपालुवा जनावरले पनि हामीलाई खुशी दिन र हाम्रो तनाव कम गर्न सक्छन् ।’ रोबर्टले सत्तरी वा अस्सी वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ । उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेका छन् । केहि मानिसहरु पहिलो पटक प्रेममा परेका छन् । त्यसैले कहिल्यै पनि यो ढिलो भएको छ भन्न सकिदैँन् ।
फेरि एउटै प्रश्नमा फर्किएर, सय वर्ष बाँच्ने उपाय के हो ? त्यसका लागि कुनै सुत्र ग्यारेन्टी दिएर भन्न सकिदैन् । तर यदि तपाईं एक भन्दा बढी व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले धेरै वर्षसम्म बाँच्न मद्दत गर्न सक्छ । आफ्नो आहार सही राख्नुहोस् । शारीरिक गतिविधि कायम राख्नुहोस् । तपाईंले कुरा गर्न सक्ने साथी वा पाल्तु जनावर खोज्नुहोस् ।
यदि तपाईं त्यस्तो देशमा बस्नुहुन्छ, जहाँ वृद्धहरूको संख्या युवाहरू भन्दा बढी छ, त्यहाँ परिवर्तनहरू हुन सक्छ, जसले तपाईंको जीवनमा उज्यालो र आरामदायी ल्याउन सक्छ । बुढ्यौली प्रक्रियालाई सुस्त पार्ने वा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्ट्याउने सूत्र अहिलेसम्म विश्व बजारमा छैन, तर वैज्ञानिकहरू यस दिशामा काम गरिरहेका छन् । तर यो नभएसम्म, रोबर्ट वाल्डिङ्गरको यो सल्लाह तपाईको लागि तपाईको शरीरको यसरी हेरचाह गर्न उपयोगी हुन सक्छ । तपाईलाई सय वर्ष सम्मको लागि यसको आवश्यक पर्न सक्छ ।
बिना शल्यक्रिया निकालियो किशोरीको पेटमा अड्किएको चम्चा, कसरी सम्भव भयो स्वास्थ्य चमत्कार